Maamulka (S) ayaa dilaya - Waxaad dhisatay shaqaale xoog leh oo ama socodsiin kara meheradaha kala duwan ama burburin kara. Waxaa muhiim ah in waqti la siiyo si loo shaqaaleeyo maamuleyaal xirfad leh si loo hubiyo in dukaamadaadu ay ugu shaqeeyaan sida aad u rabto. Ha dhayalsan awoodda xirfadaha maamul ee wanaagsan.
Aadida meelo badan ayaa dhib badan. Way fududahay in la dhayalsado ilaha loo baahan yahay ee loogu talagalay mashaariicda iyo howlaha meherad ganacsi oo meelo badan leh. Intaa waxaa dheer, ku guuldareysiga diyaarinta nidaam ganacsi iyo istiraatiijiyad suuqgeyn ah oo loogu talagalay ballaarinta ayaa sidoo kale si xun u saameyn kara waxqabadka guud ee shirkadda. Qaar ka mid ah caqabadaha ugu caansan ee ay la kulmaan meherado badan iyo noocyo kaladuwan ayaa ah:
Engagement - Go’aamada ganacsi ee aan la xakamayn iyo isdhexgalka aan nidaamsanayn waxay ku yeelan karaan culayska ganacsiga. Haddii maareeyahaagu uusan siinin isla miisaanka walaaca sidaad adigu u sameysay, waxay u badan tahay inuu shaqaalahaagu bilaabi doono inuu seego fursadaha.
In kasta oo socodsiinta goobo badan ay umuuqato wax laga naxo, hadana waa suurtagal in lagu guuleysto. Waad abuuri kartaa istiraatiijiyad suuqgeyn maxalli ah iyo sidoo kale inaad la socoto mid kasta oo ka mid ah goobahaaga oo si habsami leh u socda. Waxaa jira dhowr meelood oo si gaar ah loo dhisay si loo maareeyo howlaha ganacsi ee kaladuwan, iibka, iyo dadaalka suuq-geynta - hubi inaad sameyso shaqada gurigaaga si aad u hubiso inay taageerayaan, isu-geynta, iyo automatejiyadaha aad ka fulineyso goobaha oo dhan.
Geotargeting - Hadday ahaan lahayd xogta ku saabsan caadooyinka macaamiisha, shaqada, iyo adeegsiga baraha bulshada - adoo u weeciya falanqaynta xogta waxaad ka faa'iideysan kartaa dhul-dhisid si aad u dhisto aragtiyo ficil ah. Adiga oo bartilmaameedsanaya bartilmaameedyadaada iyo macaamiishaada, waxaad sare u qaadi doontaa dakhligaaga guud. Intaa waxaa sii dheer, waad adeegsan kartaa isla xeeladaha suuqgeynta maxalliga ah si aad u ogaato macaamiisha inay is dhaafsadaan noocyada kale ee maxalliga ah.
Suuq Geynta Farriinta Qoraalka - Kanaalka suuqgeynta ee SMS wuxuu ku korayaa si heer sare ah isla markaana ganacsiga maxalliga ah ayaa hogaaminaya xirmada kaqeybgalka. Ma jiraan wax la mid ah farriinta waqtiga ku habboon ee moobaylkaaga si aad dareenkaaga ugu soo jeediso dalab maxalli ah ama qiimo-dhimis ah.